Ukwahluke phakathi kwemifanekiso yeGoogle Earth Pro kunye neGoogle Earth ezamahala - Geofumed
Ukwahluke phakathi kwemifanekiso yeGoogle Earth Pro neGoogle Earth ekhululekile
Agasti, 2009 Google umhlaba / imephu
Kukho iingcinga ezininzi malunga nabo, bathi banako ukubona ummelwane enqunqileyo kunye nabangayifumananga nantlukwano phakathi kweenguqulelo. Makhe sibone ukuba sithetha ngeli nqanaba ngemizekelo emibini:
1 Ewe, kukho umehluko kwisisombululo
Yintoni eyenzekayo kukuba umahluko sigqibo na isiphelo yemveliso, ukuba ukukhangela imifanekiso ngeke uphawule umahluko, kodwa ukuba ugcine ukutyalwa njengoko JPG okanye uprinte bengxelo enkulu ngoko ungaqaphela.
Lo ngumzekelo, we-apula, ukuba ndisindisa umfanekiso ekuphakameni kweemitha ze-130, yabona loo nto akukho ntlukwano. Umfanekiso ongakwesokudla uvela kwiGoogle Earth Pro, ii-watermark kukuba yinguqulo yolu vavanyo; xa uvula ibhokisi enye kunye nenkululeko yamahhala, ngesizathu esingaqhelekanga sinokujikeleza okuncinane. Ndiyicinga ukuba yiyindlela amaGoogle asetshenziselwa ukudukisa.
Ngoku yabona ukuba kwenzekani ukuba ndihambe kude kwiikhilomitha ze-11.45, xa ugcina umfanekiso kunye nenkululeko yamahhala, ifayile ifanisa i-800 × 800 pixels. Xa uyilondoloza kunye nepro Pro, ithebhu iphakanyiswa ukukhetha isisombululo, ukuya kuma-pixels e-4,800.
Xa uqala ukujonga imifanekiso emibili ibonakala enye, qwa lasela uluntu lwasezidolophini luboniswe kwinqolo ephuzi.
Ukuba ndiza, unokubona oko Ewe kukho umehluko isisombululo, vumela ukuba ndiza kumgangatho we-apple ebhalwe kwibhokisi.
Kwaye oko kubizwa ngokuthi isisombululo sesiphumo, ukugcina loo mfanekiso kwisisombululo kunye nencwadana yamahhala yayiza kuhlala i-7 x 7, efana neesikrini se-49 eza kufuneka zidibanise. Okanye, kunjalo Sebenzisa iStch Maps apho banokuyilanda khona ngemifanekiso.
Kuyafana nangomzuzu wokushicilela, cinga ukuba bafuna ukuthumela kwi-plotter, ephepheni lephepha, umfanekiso wesidolophini. Ngokwenene akunakwenzeka ukusebenzisa i-free version, i-pro version iya kuyenza ngempumelelo.
2 Isiseko somfanekiso siyafana
Imifanekiso phakathi komnye nomnye iinguqu zifana, apho kungekho sigqibo esiphezulu kukho. Akunandaba nokuba yiyiphi inguqu yeGoogle Earth onayo.
3 Yintoni enye equka i-$ 400?
Ngokuthenga ilayisense yeGoogle Earth Pro ungavula amafayile afana ne:
.txt / .csv
ILWIS .mpr .mpl
Phakathi kwabanye ...
Olunye uphawu olubalulekileyo kukuba unako ukulandelela imephu ngokusekelwe kwimiqathango kunye nokusebenzisa iiflathi.
Apha banako khuphela iGoogle Earth inguqulelo
Lapha ungalanda iGoogle Earth Pro, ityala kwiintsuku ze-7.
Dgn ESRI Umhlaba ka-Google shp
Post edlulileyo«Edlulileyo Iibhaso eziphefumlelweyo kunye ne-Symposium
Post Next Iindlela ze-10 zokufumana iinqwelo-moya ezincinciOkulandelayo "
Iimpendulo ze-4 "Ukwahluko phakathi kweemifanekiso zeGoogle Earth Pro ne-Google Earth yamahhala"
joaquin roberto parizaca uthi:
. j ricardo parizaca uya
injini yezobuchwephesha zehlabathi
Yintoni eyenzekayo kukuba i-Google ibonisa i-UTM idibanisa i-WGS84, ulungelelaniso olukhankanyweyo alukwazi ukuba yile nkqubo kodwa kufuneka libe neefani ezahlukeneyo nasenyakatho, mhlawumbi inkqubo efanelwe ilizwe lakho.
Ukunika umzekelo, i-WGS84 Datum ibangela ukuba inyakatho ibe yi-Ecuador, iqala i-North kwindawo ye-zero, xa ke ifika kwindawo ye-El Salvador, ehlanganisa sele idlule kwi-1.5 yezigidi zeemitha. Kwakhona iMpuma yamanga yi-500,000 kwindawo ye-15, ke kwilizwe lakho i-X ilungelelanisa ihamba nge-200,000
Ndiqwalasele kwithebhu yezixhobo. ukhetho lokubona iilungelelaniso ku-utm, kwingingqi ye-amerika esembindini, ngakumbi i-el salvador kodwa ulungelelwaniso oluthumelayo ayisiyiyo eyokwenene, kuba loo nto iyenzeka ukuba loo mzekelo uququzelele ukuba ndibona ku-google kuya kuba ngu-X = 440845.16, y = 307853.82 Qhagamshela indawo ekwisichibi sokupheka echibini elibonwe ngo google yi-224704.25m kunye ne-1537311.93m le mininingwane emibini yendawo enye, nceda ungandivelela, enkosi